Akwụkwọ Steve Jobs | Esi m mac
N'otu ụzọ ahụ akụkọ ihe mere eme na ndụ n'onwe ya na-egosi anyị kwa ụbọchị na ọ nweghị ihe dị oke oji ma ọ nweghị ihe dị ọcha, na ndo dị n'etiti bụ isi mmalite akụ na ụba na nchọta, "Akwụkwọ Steve Jobs" rutere ịtọgbọ kaadị ndị ahụ na tebụl ma kweta otu ugboro na onye guzobere Pixar, NeXT na Apple abụghị naanị ọgụgụ isi ọhụụ nke ọtụtụ na-adọta, kamakwa ọ bụghị naanị ego ego nke ọtụtụ ndị ọzọ na-agba mbọ ime ka anyị hụ.
1 Steve Jobs, dịka onye a hụrụ n'anya
1.1 Ndị dere ya
1.2 Metamorphosis nke onye nwere mgbagwoju anya
Steve Jobs, dịka onye a hụrụ n'anya
Enweghị m obi abụọ ọ bụla na Steve Jobs nwere ọtụtụ akwụkwọ na mkpịsị aka ya n'oge ndụ ya niile, mana nke a abụghị otu n'ime akwụkwọ ndị ahụ afọ gafere na shelf, nke a bụ "Akwụkwọ Steve Jobs", akwụkwọ nke ndụ ya na ọhụụ ya mezuru, ọrụ izizi nke ebe ọ bụ na ọ kwara arịrị na iru uju na-apụ n'anya na-enwe ebumnuche zuru oke yana na-enweghị ogige ọ bụla onye Steve Jobs bụ. Akụkọ siri ike, nke gbagwojuru anya, mgbe ụfọdụ ọbụnadị obi ọjọọ, mana enweghị mgbagha na-atụkwa anya ma na-akpali akpali.
Mana ọ bụrụ na ịmụ akụkọ ihe mere eme na-akụziri anyị ihe, ọ bụ na ọ ga-abụ nzuzu ịnwa ịghọta "Akwụkwọ Steve Jobs" na-ebughị ụzọ mara ndị gbanwere ndụ ha n'okwu.
Ndị dere ya
Brent Schlender na Rick Tetzeli bụ ndị edemede nke "Akwụkwọ Steve Jobs", ọrụ nke ụlọ obibi akwụkwọ ebubatawo anyị na Spen Nzọụkwụ. Nke mbụ bụ onye nta akụkọ nwere ọrụ ọkachamara ogologo oge, na-akpọtụrụ ndị protagonists nke a na-akpọ mgbanwe mgbanwe dijitalụ; mgbe afọ iri gachara The Wall Street Journal, e webatara dị ka
nchịkọta akụkọ na ọkwa nke Fortune, ịbụ onye isi nchịkọta akụkọ ugbu a, ihe ọ na-agwakọta ya na nka ya dị ka saxophonist dị iche iche jazz na blues groups.
Rick Tetzeli maka nke ya, onye bụbu osote onye nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ akụkọ a Fortune, a na-ahụta ka otu n’ime ndị ọkachamara America kachasị na ihe gbasara teknụzụ na ego.
Ha abụọ ewuola "Akwụkwọ Steve Jobs" site na ncha, site na oke ịnụ ọkụ n'obi nke ọtụtụ hụrụ n'oge tupu na mgbe ọnwụ onye ọhụụ a gasịrị. Ọrụ jikọrọ ọnụ nke ha chọrọ afọ atọ nyocha na ajụjụ ọnụ iji mụọ ọrụ a n'ihi ozi na ntụgharị uche. Mana ma eleghị anya akụkụ kachasị adọrọ mmasị bụ ihe omimi miri emi Brent Schlender nwere banyere ọnụ ọgụgụ nke Ọrụ mkpụrụ nke afọ 25 nke ọgwụgwọ.
Nke a bụ otu esi amụ ya "Akwụkwọ Steve Jobs", biography nke karịrị nnọọ akụkọ ndụ na nke ahụ, na-enweghị iwepụ ọrụ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị, na-ewepụkarị ahụ ike na ibe ya, na-akpọ anyị ka anyị gaa n'ihu ịgụ, ịgụ, na ịgụ.
Metamorphosis nke onye nwere mgbagwoju anya
Brent Schlender na-ekwu na “enweghị m ike icheta onye ọchụnta ego nke gbanwere (ma nwee ọganihu) dịka Steve. Àgwà ya na-adịghị mma akwụsịghị, mana ọ mụtara ijide ha ”. N'okwu ndị a bụ ebe anyị hụrụ ihe kacha mkpa "Akwụkwọ Steve Jobs" ndi ibe ya mere ka anyi buru ndi amara nke ihe omumu banyere agwa ojoo, kama o bu mmadu.
Abụọ "steves" ahụ, Steve Jobs na Steve Wozniak, ndị na-akwado Apple, ahụghị ụlọ ọrụ ahụ n'otu ụzọ ahụ. Maka ọrụ, Apple bụ "ụlọ ọrụ pụrụ iche nke ga-eme ka ịmekọrịta kọmputa," ọ ga-emekwa nke a site na "nzukọ ịma aka na-abụghị usoro nchịkwa." Akụkụ a, nke dị ugbu a na ibe mbụ nke akwụkwọ a, na-egosi na Ọrụ bụ onye na-enweghị atụ ịhapụ ịhapụ ebumnuche ya, agbanyeghị, ihe ga - eme n'ọdịnihu ga - eme ka ọ mụta ọtụtụ. Ma gbanwee.
Site na "Ogige nke Allah" na "Gwa ha na m bụ onye nzuzu", ahụmịhe Steve Jobs na sụọ ngọngọ mere ka ọ gbanwee, mana ahapụkwala echiche ya
Peeji ọ bụla nke "Akwụkwọ Steve Jobs" na-aza ajụjụ nke anyị ka na-eche azịza, ma ọ bụ opekata mpe azịza doro anya.
Emegwara ma tufuo ụzọ azụ nke ụlọ ọrụ ọ hiwere, Ọrụ akwụsịghị. Ọ tọrọ ntọala NexT, ma weghara Pixar (ọ bụ ezie na ọ mere ya tupu oge ahụ), ọ bụkwa n'oge a n'etiti ndụ ya ka ọ hụrụ mgbanwe kasịnụ ya:
"Na Pixar ọ chọpụtara, n'agbanyeghị na ọ chọghị ma megide ebumpụta ụwa ebumpụta ụwa ya, na mgbe ụfọdụ ọ na-akwụ ụgwọ inye ndị nwere ikike ohere ha chọrọ", mana ọ mụtakwara otu esi agba ụlọ ọrụ n'ihi na "Enweghị nkuzi ndị a mụtara na Pixar, a garaghị ' abụwo oké ọrụ nke abụọ nke Apple, ”ka Schlender kwubiri.
Laurene Powell na Steve Jobs
"Akwụkwọ Steve Jobs" o juputara na akaebe nke na-egosi izi ezi nke ihe ndị na-agụ na-adabere. Otú o si hụ onwe ya, ka ndị ọzọ si hụ ya, okwu ndị na-ese na metamorphosis nke amamihe, mkparịta ụka na-egosi iwe ya, ọbụnadị obi ọjọọ ya n'oge ụfọdụ, kamakwa amamihe ya.
Ma n'ezie, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị peeji nke akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị ihe niile bụ azụmahịa ma ọ bụ teknụzụ, enwekwara ebe maka ịhụnanya. Isi nke iri na atọ kpọgara anyị “Stanford” ebe ọrụ zutere onye ga-abụ ịhụnanya maka ndụ ya, Laurenne. Ọ na-agụ akwụkwọ na Business School nke mahadum a ma ọrụ gara ebe ahụ ka ọ kwuo okwu ihu ọha: "Ọ nọ n'ahịrị n'ihu na enweghị m ike iwepụ anya m n'ihu ya," ka ọrụ kwuru. Etufuru m eri ahụ wee malite ịtụrụ m ntakịrị. Ihe Laurenne ji akaebe ya kwadoo: “Nke bụ́ eziokwu bụ na ahụbeghị m ụdị ụjọ ahụ mgbe ahụ.
Laurene nọrọ n'akụkụ ya ruo ụbọchị Tuesday ahụ, Ọktoba 5, 2011, mgbe ọrịa kansa gburu ya Steve Jobs. Afọ abụọ gara aga, Apple bụ ihe okike ya, Laurenne onye ọ na-achọ ịnọnyere:
“Ọ bụrụ n’inyocha ebe o nọrọ oge ọ bụla, ị ga-ahụ na ọ naghị agacha njem ọfụma yana ọ na-esiri ike ịga ọgbakọ ma ọ bụ nzukọ ndị isi ndị isi na-achọ ịgabiga ọtụtụ. Achọrọ m ịla n'ụlọ maka nri abalị, ”ka Tim Cook na-ekwu.
Steve Jobs Ọ laghachiri Apple, ụlọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri mgbe a rara ya nye. Thelọ ọrụ ahụ efuola ụzọ, enweghị ego na-abịakwa nso. Chekwa ebe dị anya, Ọrụ bụ Onye Nzọpụta nke bịara ịkpọlite ​​ya. Ya mere ọ dị. N'oge na-adịghị anya ndị iMac, iPod, iTunes na nnukwu ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ ahụ, iPhone, ọnụ ụzọ ámá maka ọtụtụ puku mmadụ ndị na-amaghịdị Apple. Ma n'ezie, iPad.
Apple, ya na Jobs na isi, gawara n'ụzọ iji bụrụ ihe ọ bụ taa, ụlọ ọrụ kachasị baa uru n'ụwa, hụrụ n'anya ma kpọkwa asị na nha anya, n'ọdịdị na oyiyi nke Steve n'onwe ya.
N'ime afọ ndị ahụ, Tim Cook ghọrọ naanị onye isi ụlọ ọrụ. Nwoke aka nri aka nri, o dochiri ya ugboro abụọ mgbe ọrịa kansa butere ezumike ya. Steve Jobs ahọrọla onye ga - anọchi ya, ọ chọrọ ka ọ bụrụ onye si n'ime, ọ gaghị enwe ike ịsụ ngọngọ ọzọ n'ihe dịka onye na - ere mmiri afụ, ọ chọrọ Tim Cook. Ya mere na-ekwu Cook onwe ya "Akwụkwọ Steve Jobs" Etu o si nweta ozi ọma na Sọnde, Ọgọstụ 11, mgbe Jobs kpọrọ onye isi ọrụ ugbu a ma gwa ya ka ọ bịa hụ ya:
Ọ gwara m, "Achọrọ m ịgwa gị otu ihe." N’oge ahụ ọ naghị apụ apụ n’ụlọ, mgbe m jụrụ ya mgbe ọ chọrọ ka m gafere, ọ sịrị “ugbu a”, ya mere agara m ebe ahụ. Ọ gwara m na ya chọrọ ka m bụrụ onye isi oche ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe o kwuru na ọ dị m ka ọ kwenyere na ọ ga-adị ogologo ndụ karịa n'ihi na anyị nwere nnukwu esemokwu banyere ma ọ dị m mkpa ịbụ onye isi na ọ ga-abụ onye isi ala. "Gịnị ọrụ ndị ị nwere ugbu a ị na-achọghị ịnọgide na-emega ahụ?" M jụrụ ya.
Ọ bụ okwu na-akpali nnọọ mmasị, ”Cook ji ihu ọchị ọchị gbakwụnye. "Will ga-eme mkpebi niile," ọ gwara m. M wee sị: "Chere ntakịrị, zaa ajụjụ n'ihu m." Kwesịrị iji ihe doro anya wee jụọ ya: "mean pụtara na ọ bụrụ na ị chetaara m mgbasa ozi ma masịrị m, enwere m ike ịnabata ya na-enweghị nnabata gị?" Steve chịrị ọchị. "Ọfọn, enwere m olileanya na ọ dịkarịa ala ịjụ echiche m!" O kwupụtara. Ajụrụ m ya ugboro abụọ ma ọ bụ atọ ma ọ bụrụ na o doro anya na mkpebi ahụ n'ihi na ọ dị m ka n'oge ahụ ọ gbakechara. M na-akwụsịkarị n'ụlọ ya n'oge izu na ngwụsị izu ụfọdụ na oge ọ bụla m hụrụ ya ọ na-adị m ka ọ ka mma. Ya onwe ya, enwekwara obi uto. O di nwute na eziokwu di iche.
O doro anya na Steve Jobs tụkwasịrị Tim Cook obi; ha abụghị ndị ọrụ ibe ha, ha bụ ndị enyi, ezigbo ndị enyi: “Steve achọghị ka anyị [mgbe ọ nwụsịrị] jụọ onwe anyị, sị: Gịnị ka Steve ga-eme n'ọnọdụ m?” Steve makwa na Cook ga-abụ onye na-achọghị 'jụọ onwe ya ajụjụ a.
Mgbe o doro anya na ọ dị mma, ahụike Steve Jobs kara njọ n'ime izu ole na ole. Anyị amatala ọgwụgwụ.
"Akwụkwọ Steve Jobs" Ọ bụ ọrụ zuru ezu nke gosipụtara ọtụtụ ngosipụta, nkọwa, mkparịta ụka na nkwupụta nke na-enyere anyị aka ikwere ihe anyị na-agụ. Ọ bụrụ na ị kwe ka m, ọrụ ọrụ nta akụkọ zuru oke.
Enwere ọtụtụ akụkụ nke m hapụrụ na akwukwu, mana ọ bụghị ajụjụ nke ikpughe ihe niile, kama ịgba gị ume ka ị gụọ ya, ebe ọ bụ na ị na-ebi ya na otu obi ụtọ m meworo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Steve Jobs akwụkwọ
Enwere ike igbu oge na Apple gụgharia vidiyo